टर्की अन्डा: लाभ र हानि
अन्डा टर्की यूरोप पहिलो प्रयास धन्यवाद Hristoforu Kolumbu: स्पेनिश अन्वेषकहरूको अमेरिकी महादेशमा गर्न चरा ल्याए (तिनीहरूले अक्सर "स्पेनी कुखुरा" भनिन्छ किनभने)।
टर्की अन्डा तिनीहरूले मलाईदार-सेतो खोल हो, लगभग 80 ग्राम वजन। तिनीहरूले स्वादिष्ट चिकन छ, तर यो एकदम दुर्लभ छ। यी सुन्दर चरा मुख्यतः खेत मा हुर्केका छन्। सामान्यतया, तिनीहरूले मासु राखिन्छ। त्यहाँ कसरी उपयोगी टर्की अन्डा बारेमा जानकारी को धेरै छ। उत्पादन फोटो तल प्रस्तुत गरिएको छ।
टर्की अन्डा पसलहरुमा फेला पार्न लगभग असम्भव छ। तिनीहरूले विशेष फारमहरु मा उपलब्ध छन्। मौसम समयमा, टर्की अधिक 25 भन्दा टुक्रा को राशि मा अन्डा छ। यो आफ्नो उच्च लागत र inaccessibility कारण हो।
प्रयोग र संसारको वितरण
अमेरिका, टर्की मूल। यो चरा लोकप्रिय कोलम्बस को भौगोलिक आविष्कारहरू गरे। स्पेन तिनीहरूले turkeys को प्रजनन लागि खेत संगठित गर्न थाले जहाँ पहिलो युरोपेली देश भए।
टर्की अन्डा विभिन्न व्यञ्जन (पाक, सलाद, omelets) को तयारी मा प्रयोग गरिन्छ। अन्डा पकाउने समय 10 मिनेट भन्दा कम छ।
कहाँ पाउन र कसरी भण्डारण गर्न
सामान्यतया मासु लागि उठाएको को turkeys छ रूपमा किन्न अन्डा, एक ब्रीडर खेत हुन सक्छ। टर्की Trot मौसम।
रूस मा, त्यहाँ उत्पादन कृषि कम्पनीहरु, हो कोरलिँदै अन्डा टर्की। यस्तो परिसर आधुनिक प्रविधिको स्थापना प्रक्रियाहरू पूरा स्वचालन लागू। टर्की अन्डा को गर्मी चालू को सेनेटरी-epidemiological स्तर र पशु आवश्यकताहरु अनुपालन मा बाहिर छ। को incubator र ग्राहकहरु जो अन्डा किन्न संग सहयोग, तपाईं गुणस्तर नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ।
विभिन्न odors प्रवेश गर्न susceptible भनेर खोल, एक अपेक्षाकृत छाडा संरचना छ। घर मा, अन्डा एक पन्जेन्ट गन्ध (माछा, मसला, प्याज, सिट्रस फल) छ कि उत्पादन देखि छुट्टयाएर फ्रिज भण्डार हुनुपर्छ। यो सूर्यमुखी तेल, अलसी तेल र खुट्टाफिन को निर्वाचकगण समाधान संग उपचार गर्न सकिन्छ। अन्डा पनि नुन समाधान मा राखिएको गर्न सकिन्छ। पकाउने प्रयोग नगरिएको yolks बाँकी पछि भने, तिनीहरूले चिसो पानी पैन मा एक फ्रिज मा भण्डारण गर्न सकिँदैन।
टर्की अन्डा विशेषताहरु
ताजा कच्चा टर्की अन्डा को ऊर्जा मूल्य 170 क्यालोरी छ। पोषण मान पानी, खरानी, कोलेस्ट्रल, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट बनेको छ। यो जटिल, भिटामिन ए र समूह बी समावेश पीपी। टर्की अन्डा macro- र पहिल्याउन तत्व फलाम, मैंगनीज, जस्ता, तामा, क्याल्सियम, फस्फोरस, सोडियम, पोटासियम बनेको छन्।
यो विश्वास छ टर्की अन्डा चिकन भन्दा tastier छ। तर, यो उपयोगी छ भन्ने तथ्यलाई, तपाईं बुझ्न आवश्यक छ। टर्की अन्डा चिकन भन्दा धेरै कोलेस्ट्रल समावेश गर्दछ। तिनीहरूले यो सूचक मा तेस्रो स्थानमा छन्। टर्की अन्डा व्यापक विभिन्न व्यञ्जन खाना पकाउने लागि प्रयोग गरिन्छ। र तिनीहरूले चिकन अन्डा मा पकाएको खाना फरक थिएन।
टर्की पोषक धेरै छ, धेरै-आवश्यक साना, अधिक ठीक बच्चाहरु को शरीर। विशेषज्ञहरु यसलाई बच्चाहरु गर्न दिन सुरक्षित छ किनभने उत्पादन, एलर्जी कारण गर्दैन साबित भयो। तर हामी खाना मा अन्डा को धेरै उपयोगी गुण बावजुद ठिक्क खपत गर्नुपर्छ, कि सम्झना गर्नुपर्छ। यो overeat छैन, सही र सन्तुलित आहार पालन गर्नुपर्छ। प्रारम्भिक गर्मी मा turkeys प्राप्त अन्डा, किनभने तिनीहरूले संरचना मा प्रोटिनको धेरै समावेश, वसन्त मा विनाश भन्दा बढी मूल्यवान सम्पत्ति छ। यो उत्पादन को स्थिर प्रयोग, चयापचय normalizes।
साथै, भिटामिन को उच्च सामग्री कारण अन्डा एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली कायम। तिनीहरूले पाचन पर्चा उल्लङ्घनको भएको मानिसहरूले खपत लागि सिफारिश छन्। सकारात्मक केन्द्रीय स्नायु प्रणाली असर गर्छ। "उच्च अम्लता संग gastritis" अन्डा खाने को एक निदान विरामी विशेष लाभ हुनेछ। कच्चा अन्डा एसिड सामग्री पत्र। तिनीहरूले enveloping उत्कृष्ट गुण र एक alkaline वातावरण छ।
cosmetology मा प्राप्त उत्पादन को व्यापक प्रयोग। विभिन्न मास्क यसको प्रयोग संग छाला वा बाल लागि तयार छन्। अण्डा स्वस्थ मान्छे को लागि धेरै उपयोगी छन्।
हानि र contraindications
टर्की अन्डा को उपयोगी गुण साथ आहार मा सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ, कुनै पनि भने:
जिगर वा मृगौला समस्या;
आगमन घटक को idiosyncrasy - पहेंलो भाग वा प्रोटिन;
मोटोपना को उपस्थिति, वजन लागि आहार को प्रयोग;
उच्च कोलेस्ट्रल तथ्याङ्कले।
टर्की अन्डा साल्मोनेला सम्भावित स्रोतहरू छन्। उत्पादन विश्वसनीय चरा देखि खरिद गर्नुपर्छ, उहाँले सारा खोल हुनुपर्छ।
टर्की अन्डा को प्रयोग
तिनीहरूले omelets र मिठाईहरू खाना पकाउने, तिनीहरू सलाद मा कटा छन् खाना पकाउने प्रयोग गरिन्छ, आटा थपियो। तपाईं खोल विभाजित र पानी उम्लिरहेको मा सामग्रीहरू खन्याउन भने र poached अन्डा प्राप्त छन्। साथै, तिनीहरूले तला गर्न सकिन्छ। Souffle तयार प्रोटीन को। अन्डा प्रयोग नगर्नुहोस्, किनभने यो पेट हानि पुर्याउन सक्छ कारण आफ्नो गरिब अवशोषण र आंतों blockage क्षय उत्पादनहरु गर्मी-उपचार,।
cosmetology टर्की अन्डा कपाल, अनुहार र शरीर को लागि एक मइस्चराइजिंग र पोसिलो मास्क सिर्जना गर्न प्रयोग गरिन्छ तिनीहरूले सफलतापूर्वक पारंपरिक अन्डा प्रतिस्थापन गर्नुहोस्।
सामान्यतया, अन्डा प्रजनन लागि प्रयोग गरिन्छ। केन्द्र मा एक चिकनी खोल, पहेंलो भाग संग स्वस्थ व्यक्तिहरूको अन्डा कोरल्ने लागि मात्र उपयुक्त। दर डाटा गुणस्तर candling मा radiographic को माध्यम द्वारा सम्भव छ।
टर्की अन्डा कसरी खाना पकाउनु
चिकन रूपमा साथै खाना पकाउने प्रयोग टर्की अन्डा। तिनीहरूले omelets, सलाद, र मिठाईहरू आटा तयार गर्न प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ इन्टरनेटमा व्यञ्जनहरु को एक किसिम हो। अन्डा टर्की, को पाठ्यक्रम, तला र उबला। यो उत्पादन को सामान्य अन्डा कसरी खाना पकाउनु? सबै धेरै सरल।
अन्डा, प्याज, नूनिलो बेकन, टमाटर, नुन, मरिच आवश्यक हुनेछ टर्की तयार। Salò अतिरिक्त नुन को खाली र स्लाइस मा कटौती गरिएको छ। टमाटर धुन, बाला हटाउन, स्लाइस मा कटौती। आधा छल्ले मा प्याज बोक्रा र कट।
एक कचौरा टर्की अन्डा पिटे मा, स्वाद नुन थप्नुहोस्। एक काँटा संग नुन संग अन्डा मिश्रण। एक कराइ मा खाली बोसो छ तरिकामा बेकन को स्लाइस तलना, तर स्लाइस नरम रहनुपर्छ। त्यसपछि प्याज थप्न र नरम सम्म यो तलना। त्यसपछि टमाटर स्लाइस को पैन राखे। पैन सबै सामग्रीहरू कहिले काँही जगाएर, उच्च गर्मी मा एक मिनेट लागि गरम छ। को बेकन, प्याज र टमाटर अन्डा मिश्रण को chunks पोख्नुहोस्। कि पछि, एक ढक्कन संग पैन बन्द मध्यम गर्मी मा अन्डा पकाउन। समाप्त पकवान सतह मा बाक्लो, थिचेर समयमा एक सानो बाउन्स छ।
पैन को अन्त मा स्टोभ बन्द पकाएको अन्डा हटाउन। पकवान तयार छ। छर्कनु अन्डा मरिच, तयारी गरेपछि वा छुट्टै पकवान रूपमा, वा garnish रूपमा तातो फाइल।
एक ग्रीनहाउस मा खुर्सानी बढ्दै
हामी zucchini बढ्न। Beloplodnye zucchini - विविधता, खेती को विवरण, समीक्षा
स्वादिष्ट मरिच: रोग को संस्कृति र तिनीहरूलाई कसरी लड्न
पात chlorosis: विवरण, फोटो, नियन्त्रण विधिहरू
तपाईंको आफ्नै हात avtopoliv सिर्जना
Tungsten, मोलिब्डेनम: मिश्र धातु आवेदन
"Roper" - dentures लागि सफाई ट्याब्लेट
नयाँ वर्ष कुना वरिपरि छ - हिम सेतो को एक सूट आफैलाई लागि के!
किन गर्मी मा फेंक? यो सिंड्रोम को कारण।